ယူရိုဇုန်အတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ တောင့်တင်းခိုင်မာ အားကောင်းနေသော်လည်း ဥရောပဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် ငွေကြေးဖြေလျှော့မှု (QE) အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်. ယူရိုဇုန်အတွင်း စီးပွားရေးတည်ငြိမ်နေအောင် အခုလို မူဝါဒကို ထိန်းထားနေတာဖြစ်ပါတယ်. ECB ကနေပြီး QEအစီအစဉ်ကို လျှော့ချသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာကြောင့် ၂၀၁၇နှစ်အစကတည်းက ယူရိုငွေကြေး အတက်ဘက်မှာသာ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. ဥရောပဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mario Draghiရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မတ်လ ၈ရက်နေ့ 15:30 MTအချိန်မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ငွေဖောင်းပွမှု, စီးပွားရေးတိုးတက်မှု, QEအစီအစဉ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး EURအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်.